Utshani yi-brush ebomvu kanye nemithi yayo yokwelapha.
Izici zezitshalo zokwelapha izibhamu ezibomvu
Ibhulashi elibomvu, igama lesibili lapho i-rhodiola ebanda khona isitshalo esiphansi se-herbaceous, esihlobene nokuphela. Blooms kusuka ngoJuni kuya ku-Agasti. Lokhu kuyi-herb ephawulekayo ebonakala ukuthi idalwe ukuphatha izifo zobulili, izifo ezingenangqondo nezifo zesifo somzimba. Ngaphezu kwalokho, indawo yokwelapha ye-herb brush ebomvu iyakwandisa kwezinye izifo ezinzima. Ake sibone ukuthi yikuphi ukuphumelela kwalesi sitshalo, yiziphi izindlela zokupheka nokuphikisana nazo.
Izinto zokuphulukisa ze-shayela elibomvu
Lesi sitshalo sinokusebenza kahle ekwelapheni izifo nezifo zezinhlelo zesimiso sokuzala kokubili amadoda nabesifazane. Izifo zabesifazane ezingaphathwa nge-brush obomvu yizo: i-follicular, i-dermoid cyst, i-endopririosis, i-endometriosis, i-neoplasms enobungozi, ukuguguleka kwesibeletho, i-amenorrhea, i-mastitis ne-mastitis. I-tea ngesisekelo se-brush ebomvu iyakwazi ukujwayelekile ukujikeleza kokuya esikhathini nokunciphisa ubuhlungu ngesikhathi sokuya esikhathini.
Kubantu, ukwelashwa nge-rhodiola kuzokusiza ukubuyisela i-potency, ukwandisa i-libido, ukwandise inani lomdanso okhishwe, nokuphulukisa ukungabi namuntu. Ukwengeza, ukunyuka kwezimila kulesi sitshalo kukhulisa amandla namandla, okubaluleke kakhulu ekuzivocavoca.
Imithi evela eRodiola iyaphulukisa ngokuphelele izifo ze-endocrine, futhi iphinde ibuyisele imishanguzo. Ukusetshenziswa kwetiyi kulesi sitshalo kunika umzimba umzimba ithoni futhi kwandisa ukusebenza kahle.
Ukwelapha nge-brush ebomvu kunqatshelwe kubantu abanomfutho wegazi ongaguquki, ukuphazamiseka kwengqondo, ukulimala kokutshala izingxenye nokubekezelelana ngabanye. Ukusuka ekutheni imithi evela kulesi sitshalo kungcono ukugwema ngesikhathi sokukhulelwa nokulahlwa. Njengoba i-rhodiola iyi-phytohormone yemvelo, ukwelashwa kungaqaliswa kuphela ngemva kokubonisana nodokotela oya khona.
Ukusebenzisa ibhulashi elibomvu
Izifo ezivuthayo zesisu (candidiasis, ureaplasmosis, colpitis), ukwephulwa kwe-microflora, i-endometriosis iqedwa ngokuphumelela ngokufaka i-decoction noma i-tincture esuka ku-rhodiola. Ukulungisa i-decoction udinga 1 tbsp. l. Yomile izinto eziwusizo ngilazi yamanzi. Hlanganisa ingxube ukuze ubilise, bese uvumela ukupholisa. Ukushaywa ubuthongo kwenziwa ngomhluzi ofudumele ekuseni nakusihlwa. I-tincture ingathengwa ekhemisi noma ilungiselelwe ngokuzimela. Ukuze wenze lokhu, 50 g wezinto eziluhlaza kumele athulwe ku-0.5 litre yotshwala, emva kwalokho isitsha esinenhlanganisela kufanele sibekwe endaweni emnyama amasonto amabili. Ngaphambi kokugcoba, ithisipuni eyodwa kufanele ihlanjululwe ku-50 ml yamanzi abilayo afudumele.
Ngezinye izifo ezithathelwanayo, kanye nezinkinga zabantu, i-decoction (i-1 isipuni i-rhodiola nge-1 ingilazi yamanzi) kufanele ithathwe ekuseni ngesisu esingenalutho ku-1 ingilazi nangaphambi kokulala ngamalitha ayi-100. Inkambo yokwelapha amaviki amabili.
Ukuze uvikele ukuzivikela futhi uphathe izifo ze-endocrine, itiye ngokufaka ijusi kalamula kanye namaconsi ambalwa amafutha we-bergamot azokwenza. Kulo 1 litre lamanzi udinga cishe 30 g wezitshalo zomhlabathi, 2 tbsp. l. Ijusi le-lemon kanye nama-3-4 amaconsi amafutha e-bergamot.
Njengoba ibhulashi elibomvu linamandla okulinganisa ama-hormone ezocansi, ngaphambi kokusebenzisa, buza udokotela futhi, uma kungenzeka, uhlole ukuhlola iphethini ye-hormonal.
Inhlanhla futhi ube kahle!
Indlela yokuthuthukisa umbono ngosizo lwabantu abaphekayo?
Ukuphulukisa izindawo ze-Irgi
Ngesikhathi silala, izinto ezimangalisayo zenzeka emzimbeni wethu ...
Iziphi izifo ezisebenzisa i-nettle?
Ukuhleleka okuqondile kanye nempilo yakho
Imithi yendabuko: ukwelashwa kwe-myositis
Khetha umbala wezinwele okufanele ubhekane nazo
Isaladi ngehhafu nobhontshisi
I-pasta ne-bacon no-tomato sauce
Kunzima esikhathini sokuhamba kwesikhathi
Ukudla kwemifino: indlela ongayisebenzisa ngayo ukukhukhumeza nokugwema umdlavuza
Ama-noodle we-egg ane-sauce soy
Ukunakekelwa ubuso ngemikhiqizo yemvelo
I-Rooster ene-poppy yokugcwalisa
Kanjani masinyane ukubuyisela ukuhleleka endlini?